Chautari Daily » कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म कतिले ज्यान गुमायो ? हेर्नुहोस् ।
कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म कतिले ज्यान गुमायो ? हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं / कोभिड-१९ कोरोना भाइरसले सोमबारसम्म ३७ हजार ८ सय १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार एकै दिन ३ हजार ७ सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबारसम्म विश्वभर कोरोनाले ७ लाख ८५ हजार ७ सय ७५ जना संक्रमित छन् भने १ लाख ६५ हजार ६ सय ७ जना निको भएका छन्।
सोमबार एकै दिन स्पेनमा ९ सय १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्पेनमा ७ हजार ८ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै स्पेनमा ६३ हजार ४ सय ६० जना संक्रमित छन्। जसमध्ये ५ हजार २ सय ३१ जना गम्भीर छन्। त्यस्तै १६ हजार ७ सय ८० जनाको उपचार भइसकेको छ। कोरोनाले स्पेनमा हालसम्म ७ हजार ७ सय १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। स्पेनमा सोमबार सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।
कोरोनाले सोमबार एकै दिन इटलीमा ८ सय १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा ७५ हजार ५ सय २८ जना संक्रमित छन्। जसमध्ये ३ हजार ९ सय ८१ जना गम्भीर अवस्थाका छन्। इटलीमा नयाँ संक्रमित ४ हजार ५० जना थपिएका छन्। हालसम्म इटलीमा ११ हजार ५ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
त्यस्तै अमेरिकामा सोमबार ५ सय ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। योसँगै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार १ सय ५६ पुगेको छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या १ लाख ५५ हजार १ सय ८१ पुगेको छ। जसमा नया संक्रमित २० हजार ३ सय ५३ रहेको छ। त्यस्तै ३ हजार ५ सय १२ जना गम्भीर रहेका छन्।
प्रकाशित मिति १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०३:१८
मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् । शुभ दिन
महानायक राजेश हमाल र दुर्गेश थापाको भिडियो सार्वजनिक
कोरोना कहरका बिच रोजगारीका लागि विदेश हिँडे नेपाली
नेपालमा कोरोनाबाट थप १९ जनाको मृत्यु
जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना, ४ जनाको घटनास्थलमै निधन
पढ्दा पढ्दै केटासंग भागेपछि यसरी सडकमा पुगेकी थिइन सपना (भिडियो हेर्नुहोस् )